Train Travel Tips Archives | Page 2 of 14 | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Qof kasta oo halkan ka baxsan Yurub? gacantaada sara kicin haddii aad sida xifadiisa, gaadiidka dadweynaha sida aan ahay. Hubaal, New York waxay leedahay marin-hoosaad, iyo Toronto ayaa maamusha metrooga, laakiin guud ahaanba, dunidu ku koray baabuurta. Markaa markasta oo aan helno annaga oo samaynayna…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Adduunyada oo dhan, tiifintu waxay leedahay raadayn iyo dhaqangelin aad u kala duwan, tusaale ahaan: Talobixinta Koonfur Afrika ayaa loo baahan yahay, sida ay maraykanka tahay. Waxaa lagaa filayaa inaad ka baxdid caarada u dhaxaysa 15 iyo 25% Ameerika, iyo hadaadanad jeclayn aad u badan…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxaa si sax ah loo rumeysan yahay in safarku uu yahay hal shay oo aad iibsato si aad u noqoto ama aad u dareento hodan! Had iyo goorna ma'aha lagama maarmaan inaad u baahan tahay inaad kala goyso lacagtaada dadaalka badan si aad ugu raaxeyso hodantinimada. Iyada oo la qorsheynayo in ay ka baxdo qorraxda-dhunkato kuleylka…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Uur yeelashada waa mid ka mid ah waqtiyada ugu fiican noloshaada. Way dhacdaa, si kastaba ha ahaatee, la imaado xaddidaadaha qaarkood. Gaar ahaan haddii aad qorsheynaysid socdaalka inta aad uurka leedahay. Qaadashada iyo dhisida ilmaha waxay xaddidaysaa nooca gaadiid ee aad u isticmaali karto inaad ku socoto, gaar ahaan marka…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Covid-19. Waa wax uun aan u muuqan karno inaan ka hadalno, iyo sabab wanaagsan. virus Tani ayaa qabsadey dunida iyo sida aan u fekero nolol maalmeedka iyo dabcan in Tareenku Travel gabi ahaanba beddelay. Train Travel is a mode of transport many…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Europe waxay hoy u tahay soo diyaariyeen ah ee taariikhda dhaqanka iyo naqshadaha breathtaking, inta badan kaas oo la qabtay iyada oo loo marayo qaarada Afrika ee ururinta badan goobaha cibaadada. Taasi waa sababta maanta, ayaan waxaan soo kaxaysatay 3 in aan ku taameysid isagoo buuxda waajib-arkaa, oo daboolaya dhismayaasha caanka ee adduunka qaarkood…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Tag on tuurnimo in xanxantayn hari dhadhanka iyo ka qayb ah tours cuntada ugu fiican Yurub. Haddii aad tahay qof aad u xiiseeya foodie, aad dhanxanegga, iyo sidoo kale aad Instagram feed farxad boodi doonaa waxa aad la kulmi doonaan. Dabcan, sida ugu fiican…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Iyada oo ka dillaacay hadda qorshaha safarka qof kasta tuuro coronavirus ee jahawareersan, waxay noqon kartaa mid adag in la ogaado haddii ay tahay inaad dhawrtaan oo aad fasax lagu jiro coronavirus ama ma. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s important…